Afa-miaritra tsy fisian-drano mandritra ny herinandro maro ny faritra mahantra indrindra ao Jordania, ny manankarena kosa mahazo famatsian-drano 24/7 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2018 14:03 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Swahili, عربي, Français, Italiano, русский, Español, čeština , 繁體中文, English
Jordania no firenena faharoa mahantra rano indrindra eto an-tany. Ikambanana amin'i Israely ny iray amin'ny mpamatsy rano azy miisa roa, ny Reniranon'i Jordana, ary ikambanana amin'i Syria ny iray hafa, Reniranon'i Yarmouk – izay mahatonga ny rano ho an'i Jordania ho ampahany kely sisa.
Raha ny momba ireo tobin-drano 12 hita manerana ny firenena, ahiahy ny faharetany satria ampiasaina amin'ny fandehany faran'izay ambony izany, ary ny hafa kosa ampiasaina tafahoatra, mandrahona ny fampiasana azy amin'ny ho avy.
Nahasempotra ireo olona 1,4 tapitrisa fanampiny monina any Jordania miankina amin'ny loharanony voafetra noho ny ady Syriana ny toe-draharaha.
Raha mijery ny hoavy, dia ny fiovaovan'ny toetr'andro ihany no tena mandrahona hanimba izany (tsy fisian-drano). Naminavina ireo mpahay siansa avy ao amin'ny Oniversiten'i Stanford fa amin'ny faran'ny taonjato, dia mety hafana 4°C kokoa, sady tsy dia misy orana. Noho izany dia atahorana ny mety ho tsy fisian-drano tanteraka, satria mety ho avo roa heny ny haintany sy ny faharetany eo anelanelan'ny taona 2071 sy 2100.
Na dia tsy azo lavina aza ny tolona, mahatsapa tsy fitoviana ny olom-pirenena miisa 9.903.877 any Jordania. Matetika mifamatotra amin'ny sata ara-tsosialin'ny faritra ny tsy fahombiazan'ny governemanta hanome rano ho an'ny toerana sasany.
Tamin'ny taratasy nalefa ho an'ny governemanta izay mitaraina mikasika ny olan'ny rano, olom-pirenena iray monina ao amin'ny faritanin'i Jerash nilaza hoe:
Na izany aza, mampanantena fitsinjarana rano ara-drariny ny governemanta amin'ity taona ity ary azo antoka ny famatsian-drano eny amin'ny faritany mandritra ny fahavaratra. Antenaina fa hitàna izany fampanantenana izany izy – na izany na tsy izany, zon'ny olombelona ny rano.